Sajhasabal.com | Home'समय नै गुरु'
प्रभात सुवेदी | ‘गुरु’ शब्द आफैमा अत्यन्तै प्रिय लाग्ने शब्द हो । यसको शाव्दिक अर्थलाई केलाउने हो भने पनि ‘अँध्यारो हटाउनु’ वा ‘अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ’ भन्ने लाग्दछ । हिन्दु परम्परा अनुसार हरेक वर्ष असार शुक्ल पूर्णीमालाई व्यास जयन्ती अर्थात गुरु पूर्णीमाको नामले पुकारिन्छ । जुन दिन हिन्दु विद्यार्थीहरुका लागि अत्यन्तै ओझिलो दिन पनि हो । मानव जीवनलाई संस्कारले नै संस्कारित गरेको हुनाले वर्तमान अस्तित्वमा रमाएको छ । यदि मानिसबाट संस्कार हट्ने हो भने मानव अस्तित्व नै धरापमा पर्ने कुरालाई नकार्न पनि सकिँदैन । वास्तवमा संस्कार छ र त मानव अस्तित्व यो धर्तीमा अहिलेसम्म कायम रहेको छ । तथापि अहिले आएर मानव संस्कारमा केही विश्रृङ्खलता उत्पन्न भएको छ । जसका कारण प्रविधिको दुरुपयोग गर्दै विभिन्न हत्या, हिंसा भैरहेको अवस्था रहेको छ । यो अत्यन्तै भयावह कुरा हो मानव अस्तित्वको लागि । यति मात्रै हैन कुनै पनि मानिसले आफ्नो ज्यान भन्दा पनि कुनै पनि घटना घटाउनु महत्वपूर्ण मान्दछ र आत्मघाती विष्फोटन गराउँछ । आफू पनि सिद्धिन्छ र अरुलाई पनि सिद्ध्याउँछ । यो सबै संस्कारको कमी हो । गुरुको अभाव हो । मानिसले मानव हुनुको मूल्य दिनप्रतिदिन विर्सिरहेको छ । आफूलाई चिन्न छाडेर निहित स्वार्थलाई जीवनको अन्तिम लक्ष्य बनाएको छ । हो, यही स्वार्थको प्राप्तिमा लाग्दै गर्दा अनेकन कुकर्महरुको खाडलमा जाकिएर जीवन समाप्तितर्फ उन्मुख भैसकेको उ आफैलाई नै पत्तो हुँदैन । समाप्तिपछिको परिणाम के हो वा के भो भनेर पनि उसलाई जानकारी हुँदैन जुन कुरा संभव पनि त भएन । यति हुँदाहुँदै पनि मानिस किन स्वार्थको खाडलमा भौंतारिहरको होला । एकछिन गम्भीर भएर सोच्न मन लाग्छ !
असार ४ गते विभिन्न स्थानहरुमा विभिन्न तरीकाले गुरु पूर्णीमा मनाइएको छ । हुनत यो दिनमा ज्ञानका अथाह सागर वेद, उपनिषद् तथा पुराणका रचयिता वेदव्यासको जन्म भएको दिन हो । व्यासलाई हिन्दु वाङ्मयका गुरुका रुपमा हामी श्रद्धा गर्दछौं । हाम्रा वैदिक ग्रन्थहरु सबै मानव कल्याणका लागि बनेका कानुन नै हुन् । हिन्दू धर्मका मात्रै नभएर अन्य सबै धर्मका ग्रन्थहरु मानिसलाई संस्कारित गर्नकै लागि बनाइएका हुन् । तथापि हामीले यसको महत्व बुझ्नै सकेनौँ र यसको फाइदा गैर हिन्दुहरुले उठाइरहेका छन् र आफू अनुकुल पुनर्निर्माण गरिरहेका छन् । यो हामी हिन्दुहरुको लागि अत्यन्तै पश्चाताप लाग्नुपर्ने विषय हो । आज हाम्रा भाषाहरुमा आक्रमण भैरहेका छन् । अक्षरहरुमा राजनीति चलिरहेको छ । यसमै जुङ्गाको लडाईँ लड्नेहरुको कमी छैन । एउटाले एकथोक भन्छ, अर्काले अर्को थोक भन्छ, एउटाले ह्रश्व लेख भन्छ, अर्काले दिर्घ लेख भन्छ, एउटाले लेखनको भाषा यो हो भन्छ, अर्काले बोलिचालीको भाषा लेख भन्छ । हाम्रो भाषा आत्तिइरहेको छ, निस्सासिइरहको छ अनि छटपटाइरहेको छ । यसरी छट्पटाएको भाषाबाट अबका बालबालिकाहरुले के सिक्ने त खै ? यो अतासपूर्ण भाषा र ज्ञानबाट हामीले कहिले मुक्ति पाउने हो त ? भाषाको त मानक हुनुपर्ने हो, सर्वसम्मत मान्यता पाएको व्याकरण हुनु पर्ने हो । तर, विडम्बना जसलाई जे मन लायो त्यही गरिरहेछन् आज । जसले जे चाह्यो त्यही भैरहेको छ आज ।
वास्तवमा गुरु, गुरु नै हो । मानिसको पहिलो गुरुको रुपमा जन्म दिने आमा, बाबा हुन् । यसमा कुनै पनि शन्देह छैन । त्यसपछिका गुरु भनेका मानव सभ्यताको महत्पूर्ण पाटो शिक्षा दिने गुरु मान्नु पर्दछ । अर्थात अक्षराम्भ गराउँदै सिकाइ व्यवहारलाई निरन्तर परिवर्तन गर्दै असल संस्कार चिनाउँदै सामाजिकीकरणको प्रकृयामा लैजाने व्यक्ति यो स्थानमा पर्दछन् । नेपाली शब्दकोषमा हेर्ने हो भने गुरुको अर्थ यसरी प्रष्ट्याएको छ ः–
कुनै पनि विद्या वा शिक्षा प्रदान गर्ने व्यक्ति, शिक्षक, अध्यापक, । सङ्गीतकला आदि सिकाउने व्यक्ति, उस्ताद । गायत्री, वेदमन्त्र आदि दीक्षा दिने व्यक्ति, आचार्य । बुद्धि, बल, उमेर, विद्या आदिमा श्रेष्ठ तथा आदरणीय वा पूज्य व्यक्ति, मान्य जन । यसरी विद्या वा ज्ञान दिने व्यक्ति वा कुनै पनि कला वा सिप सिकाउने व्यक्ति जो बुद्धि, बल, उमेर, विद्याले निपूर्ण होस्, त्यस्तो व्यक्तिलाई गुरुका रुपमा हामी सम्मान गर्दछौँ । यो शब्दकोषमा लेखिएको कुरा पनि अन्तन्तै प्रासाङ्गिक रहेको छ ।
आजभोली यसको मर्ममा केही प्रहार भएको छ । असार ४ गतेका दिनमा सामाजिक सञ्जालहरुमा यसको रमिता देखियो । सबैले प्राय गुरुप्रति सभक्तिपूर्वक नमन गरे । सायद यसबाट यो पंक्तिकार पनि अछुतो छैन । तर, यो पंक्तिकारले हरेक कर्महरु आफ्ना पिता पूर्खाहरुलाई नै स्मरण गरेर गर्ने गर्दछ । गुरु पूर्णीमाको दिनमा केही चेलाहरुको फोन पनि आयो । गुरु पूर्णीमा परेर आज सम्झेको गुरुलाई । मैले पनि आशीर्वाद र सफल जीवनको कामना गरेँ हौषला दिएँ प्रेरणा दिएँ मेरा शिष्यहरुलाई । तर जसरी हामीहरु शब्दमा खेल्न सिपालु भएका छौँ तस्वीरहरु पोष्ट गरका छौँ के हाम्रो व्यवहार त्यो रुपमा छ त एकछिन सोचौँ त । ती सिपहरु वास्तविक रुपमा कार्यान्वय गर्न सकिरहेको अवस्था भने पक्कै छैन । आज गुरु शब्द उच्चारण गर्न समेत हामी अल्छि मानिरहेका छौँ कञ्जुस्याँईँ गरिहरका छौँ । अनि भनिदिन्छौँ बडो सहज तरिकाबाट ‘सर’ । यसको साटो गुरु भन्दा के बिग्रियो ? ल भन्नुस् त । आमाबाबालाई मम्मी र ड्याडी भन्दैमा हामी गौरव गर्नेहरुले के गुरु पूर्णीमा अनि टिचर्स डे मनाउनु ? माता पिता भन्दा हुँदैन र ? के फरक पर्छ । यसको अर्थ यो होइन कि कुनै अन्य भाषिक रुपान्तरणको विरोध । हामीले हाम्रा आफ्नै मौलिक परम्परा र संस्कारमा भएका सकारात्मक व्यवहारहरु अनुसरण गरौँ भन्न मात्रै खोजेको हो ।
वास्तवमा गुरु कसलाई मान्ने वा सद्गुरु कसलाई मान्ने ? तपाईंहरुसँग यसको सहज उत्तर हुन सक्ला तर मलाई लाग्छ, यसको ठेट उत्तर मसँग भने छैन । किनकी गुरु प्रकृतिमा पाइने र देखिने वा अस्तित्वमा भएका सबै चराचर सजीव तथा निर्जीव सबै बस्तुहरु हुन् । एउटा कलम, कापी, हावा, सूर्य (आगो), चन्द्र, पानी, हरेक वनस्पति, जीवहरु, माटो सबै नै त गुरु हुन् । कलम ले व्यवहार सिकाउँछ, कापीले खुला हृदय र सहनशीलता, हावाले स्वच्छता, सूर्यले जीवन, चन्द्रले शीतलता, पानीले निर्मलता, वनस्पतिले जिम्मेवारी, जीवहरुले कर्म, माटोले धर्म सबै सबै कुरा हेर्नुस् त, अनि विचार गर्नुस् त एक्कै छिन् । अब प्रश्न उठ्न सक्दछ आखिर गुरु को त ? ल अब खोजौँ त उत्तर ?
हरेक धर्म वा शास्त्रको मान्यता नै यही हो कि, ‘परापकार पुण्याय, पापाय परपीडनम्’ अनि यो मर्मले पनि त गुरुकै आभाष कहिँ न कहिँ दिन्छ । त्यसैले अक्षर गुरु, शब्द गुरु, वाक्य गुरु, पुस्तक गुरु सबै सबै बस्तुहरु गुरु हुन् । अनि हामी कसरी सक्छौँ यी कुराहरु निषेध गरेर अगाडि बढ्न । त्यसैले गुरु, शिक्षक, सर, भाइसाप जे भनेर पुकारे पनि आखिर हामीले आफ्नो कर्तव्य विर्सनु भने कदापि हुँदैन । जीवन अमूल्य छ संस्कार भन्दा ठूलो कुरा जीवनमा अरु केही पनि हुन सक्दैन हरेक दिन हाम्रा लागि गुरु बनेर उदाउँछ अनि केही न केही पाठ सिकाएर अस्ताउँछ । समय नै सबैभन्दा ठूलो गुरु हो । समयको महत्व बुझी कुनै पनि काम सहि तरिकाले उपयुक्त समयमा गर्न सक्नु नै ठूलो सफलता प्राप्त गर्नु हो । त्यसैले समयलाई मूल गुरु ठानौँ विचारौँ र मनन गरौँ । जय गुरुदेव ।